गुगल मेरो व्यवसाय: डचटाउन गाइड (भाग दुई) • DutchtownSTL.org
गुगल मेरो व्यवसाय भाग दुई: व्यवसायहरूका लागि डचटाउनको गाइड
In Google My Business मा डचटाउन गाइडहरूको एक भाग, हामीले साना व्यवसाय मालिकहरू देखाउँदछन् कि कसरी गुगलमा उनीहरूको सूचीकरण नियन्त्रण गर्ने। आजका दिनहरूमा सबैले पसल, रेस्टुरेन्ट, सेवाहरू, र सबै कुरा पत्ता लगाउन गुगल प्रयोग गर्दछ। तपाईंको व्यवसायको गुगल प्रोफाइल प्रबन्धन ग्राहकहरूमा चित्रण गर्न आवश्यक छ।
Google मेरो व्यापार उपकरण हो जुन तपाईं आफ्नो प्रोफाइल प्रबन्ध गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाइँको ठेगाना, व्यापार घण्टा, र सम्पर्क जानकारी जस्ता धेरै आधारभूत जानकारी प्रदानको साथसाथै, Google मेरो व्यवसायले तपाईंलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न र अधिक ग्राहकहरूको पहुँच गर्न मद्दतको लागि उपकरणहरूको एक सूट प्रदान गर्दछ।
हाम्रो मार्गनिर्देशनको दुई भागमा हामी तपाईंको प्रोफाइल स्थापना गर्नका आवश्यक वस्तुहरू भन्दा टाढा जान्छौं र Google मेरो व्यापारको केही उन्नत सुविधाहरूमा डुब्ने छौं। हामी तपाईंको प्रोफाईल कायम राख्न र वर्तमान र सम्भावित ग्राहकहरूलाई व्यस्त राख्न मद्दत पुर्‍याउँछौं।
गुगल मेरो व्यवसाय भिडियो गाइड भाग दुई
फेरि, डचटाउन निवासी र व्यवसाय मालिक जेनेसा वेस्ट तपाईंको यात्रा मार्गदर्शक हो। सुझाव र युक्तिहरु को लागी अनुसरण गर्नुहोस् तपाईको गुगल व्यवसाय प्रोफाइल लाई अलग राख्नुहोस्।
तपाईं बाट भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ Google My Business मा हाम्रो गाईडको एक अंश माथि डचटाउनस्टाल यूट्यूब च्यानल.
चरण वाकथ्रुद्वारा चरण: उन्नत गुगल मेरो व्यवसाय सुविधाहरू
भाग एक रिक्याप
हाम्रो अन्तिम चरणमा गाइडमा, हामीले काल्पनिक दक्षिण साइड स्नैक शपको लागि प्रोफाइल सिर्जना गर्‍यौं। केही दिन भित्र नै खाजा पसल गुगल र गुगल नक्सामा खोजीमा देखा पर्‍यो। (हाम्रो उदाहरण वास्तविक व्यवसाय होईन, त्यसैले हामीले स्नैक शपलाई अस्थायी रूपमा बन्द गरेको रूपमा चिन्ह लगायौं।)
यदि तपाईं गुगल नक्शामा “सुविधा स्टोर” खोज्नुहुन्छ भने, तपाईले दक्षिण साइड स्नैक शप नक्शामा पप अप र साइडबारमा सूचीबद्ध परिणामहरूमा देख्नुहुनेछ।
यति मात्र आधारभूत प्रयासको साथ पनि हामी यो सुनिश्चित गर्न सक्षम भयौं कि हाम्रो व्यवसाय गुगलमा सूचीबद्ध छ र ग्राहकहरूको लागि उपलब्ध जानकारी सही थियो।
तपाईंको व्यवसाय प्रमाणित गर्नुहोस्
जब तपाईं हाम्रो अघिल्लो गाइड अनुसरण पछि तपाईंको प्रोफाइल सेट अप गर्नुहुन्छ, गुगलले तपाईंलाई एक प्रमाणिकरण कोडको साथ पोष्टकार्ड पठाएको हुन सक्छ। यो सँधै आवश्यक हुँदैन, तर केहि परिस्थितिहरूमा - खास गरी यदि तपाईले स्थापित व्यवसायको दावी गरिरहनु भएको छ जुन गुगलले पहिले नै सूचीबद्ध गरिसकेको छ - तपाईंले व्यवसायको स्वामित्व प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईंले पोष्टकार्ड प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंको प्रोफाईलमा लग ईन गर्न निश्चित गर्नुहोस् Business.google.com र तपाईंको प्रमाणिकरण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्। फेरि, यो सबै केसहरूमा लागू हुँदैन।
तपाईंको गुगल मेरो व्यवसाय प्रोफाइललाई अनुकूलन गर्दै
सानो व्यापार चलाउन गाह्रो काम हो। तपाईंको गर्नुपर्ने कार्यमा अर्को कार्य थप्नु उत्तम छैन, तर यो ध्यानमा राख्नुहोस् कि, तपाईंको स्टोरफ्रन्ट बाहेक तपाईंको गुगल व्यवसाय प्रोफाइल अनुहार हो जुन तपाईंले सम्भावित ग्राहकहरूको अगाडि राख्नु भएको छ।
दिमागमा रहेको साथ, हामी सुझाव दिन्छौं कि आफैँलाई एक रिमाइन्डर सेट गर्नुहोस् (कम्तिमा मासिक तर आदर्श साप्ताहिक) तपाईको गुगल प्रोफाइल बारम्बार जाँच र अपडेट गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सबै व्यवसाय जानकारी सहि छ, जाँच गर्नुहोस् र समीक्षाको जवाफ दिनुहोस्, पोष्टहरू सिर्जना गर्नुहोस्, र फोटोहरू थप्नुहोस्। एक सक्रिय र अप-टु-डेट प्रोफाइल सम्भावित ग्राहकहरूको लागि बढी आकर्षक छ जसले तपाईंलाई गुगलमा भेट्छन्।
गुगल मेरो व्यवसायमा तपाईंको जानकारी अपडेट गर्दै
हाम्रो प्रोफाइलमा आधारभूत जानकारीमा एक नजर राख्दछौं र समावेश गर्न मिल्ने कुनै अपडेटहरू वा थपहरू छन् कि छैन हेर्नुहोस्। तपाईंको जानकारी तान्नका लागि बाँया साइडबारमा "जानकारी" लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
विशेष रूपमा व्यवसायको लागि महत्त्वपूर्ण जुन उनीहरूको मुख्य स्थान भन्दा बाहिर डेलिभरी वा सेवाहरू प्रदान गर्दछ, तपाईं आफ्नो क्षेत्रहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा तपाईले सोह्र सेवा क्षेत्रहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
मानौं कि दक्षिण साईड स्न्याक शपले ग्राहकहरुलाई डेलिभर गर्ने निर्णय गरेको छ। हामी हाम्रो वितरण क्षेत्र ग्रेटर डचटाउन क्षेत्रमा सीमित राख्नेछौं, त्यसैले हामीले डचटाउन, माउन्ट प्लेइजन्ट, मरीन भिल्ला, र ग्रेभोजी पार्क समावेश गरेका छौं। चाँडै, जब व्यक्तिहरू "Gravois पार्क मा सुविधा स्टोर" को लागी खोजी गर्दछन्, हाम्रो पसल सूचीबद्ध गरिनेछ।
हाम्रो उदाहरण छिमेकको लागि एकदम विशिष्ट छ। यदि तपाईंको व्यवसायले मेट्रो सेन्ट लुइस क्षेत्र भर सेवाहरू प्रदान गर्दछ, तपाईं व्यापक सेवा स्थानहरू छनौट गर्न चाहानुहुन्छ — St। लुइस, म्यापलवुड, एफ्टन, युनिभर्सिटी सिटी, र यस्तै। फेरि, तपाईं सोह्रवटा क्षेत्रहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, र यदि तपाईं समग्रमा मेट्रो क्षेत्रको सेवा गर्नुहुन्छ भने तपाईंले सबै सोह्र स्लटहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
गुगल मेरो व्यवसायले तपाईंलाई तपाईंको व्यवसाय प्रोफाइलमा विशेष गुणहरूको संख्या थप्न अनुमति दिन्छ। जानकारी प्यानलमा एक बिट तल स्क्रोल गर्नुहोस् र तपाईंले "व्यवसायबाट" लेबलको सेक्सन देख्नुहुनेछ। यहाँ तपाईं स्वास्थ्य र सुरक्षा सावधानीका बारे तपाईंले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ सेवाहरू जुन तपाईंले प्रदान गर्नुहुन्छ, भुक्तान विधिहरू तपाईंले स्वीकार्नुहुन्छ, र अधिक। यी सुविधाहरू मध्ये केहि थपौं।
माथिबाट सुरू गरेर, हामी हाम्रो व्यवसायमा केही पहिचान सुविधाहरू थप्न सक्छौं। कालो स्वामित्व, महिला नेतृत्व, वा अनुभवी स्वामित्व। व्यक्ति विशेष प्रकारका व्यवसायका लागि खोजी गरिरहेका हुन सक्छन्, र यी पदनामहरूले तपाईंलाई सहयोग गर्न सहयोग गर्दछ। (खैर, हामीसँग पनि एक छ डचटाउनमा कालो स्वामित्वको व्यवसायको सूची).
तल स्क्रोलिंग गर्दै, तपाईं खोजीकर्ताहरूलाई तपाईंको व्यवसायमा व्हीलचेयर पहुँच योग्यताको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ, तपाईंसँग सार्वजनिक शौचालय छ, वा यदि तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई वायरलेस इन्टरनेट प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने।
विशेष गरी COVID-19 को समयमा, सम्भावित ग्राहकहरू थाहा पाउन चाहन्छन् कि तपाईंको व्यवसायले कस्तो प्रकारको सुरक्षा सावधानी अपनाइरहेको छ। लागू हुने कुनै पनि र सबै छनौट गर्नुहोस्। यो लेखोटको रूपमा, सेन्ट लुइस शहर अझै एक मास्क जनादेशको अधीनमा छ, त्यसैले "मास्क आवश्यक" र "स्टाफ मास्क लगाउँनुहोस्" (र तपाईंले मास्क लगाउनुभएको निश्चित गर्नुहोस्!) जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
थप तल, तपाईले स्वीकार्नु भएको भुक्तानी प्रकारहरू सूचीत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं केवल नगद लिनुहुन्छ भने, "नगद केवल" बाकसमा चिन्ह लगाउनुहोस्, तर यदि तपाईं अन्य भुक्तानी स्वीकार गर्नुहुन्छ भने, "नगद केवल" बाकस अनचेक छोड्नुहोस्। "केवल नगद" भएको र अन्य विकल्पहरू चयन गरिएको ग्राहकलाई भ्रामक वा भ्रमपूर्ण हुन सक्छ।
र अन्तमा, हामीसँग सेवा विकल्पहरू छन्। हामीले उल्लेख गरेझैं हाम्रो उदाहरण पसलले डेलिभरी गर्न सुरू गरिसक्यो, त्यसैले हामी यहाँ सेवा थप्न निश्चित गर्नेछौं। तपाईं अन्य विकल्पहरूको संख्या चयन गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको व्यवसायमा लागू हुन्छन्।
अधिक समय र विशेष घण्टा
गुगलले तपाईंलाई थप र विशेष घण्टा थप्न विकल्प दिन्छ। हुनसक्छ तपाईं विशिष्ट पिकअप घण्टा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, वा तपाईंको रेस्टुरेन्टले सप्ताहन्त ब्रन्च प्रदान गर्दछ। "अधिक घण्टा" अन्तर्गत सम्पादन बटन क्लिक गर्नुहोस् र तपाई अतिरिक्त सेवा समयको धेरै कोटिहरू थप्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो उदाहरणमा, हामी बुधवार खुसीको घडी — २ को लागि सोडासमा थप्नेछौं!
तपाईं छुट्टी वा अन्य समयमा चीजहरूको लागि विशेष घण्टा थप्न सक्नुहुन्छ तपाईं अनियमित घण्टामा खुला वा बन्द हुन सक्नुहुन्छ। यस लेखनको समयमा ईस्टर नजिकैको साथ, गुगलले सुझाव दिन्छ कि हामी हाम्रो इस्टर घण्टा पुष्टि गर्दछौं। यदि तपाइँ निश्चित छुट्टिहरूमा खुला रहन योजना गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको घण्टा पुष्टि गर्नु तपाइँको समूहबाट तपाइँलाई बचाउने उत्तम तरिका हो "के तपाइँ खुला हुनुहुन्छ?" फोन कल।
तर तपाई केवल छुट्टीहरूमा सीमित हुनुहुन्न। हाम्रो उदाहरणमा, हामी भन्छौं कि हामी अर्को बुधवार बन्द छौं। हामी शुक्रबार विस्तारित घण्टाको साथ खुला छौं कि एक अपडेट थप्नेछौं।
एक अर्डर राख्नुहोस् वा एक नियुक्ति बनाउनुहोस्
यदि तपाईंको व्यवसायले अनलाइन आदेशहरू स्वीकार गर्दछ भने, तपाईं यहाँ आफ्नो अनलाइन शपमा लिंक समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। ग्राहकहरु तपाइँको अर्डर गर्न को लागी उनीहरूको गुगल खोजबाट सिधा जान सक्षम हुनेछ।
कस्तो प्रकारको व्यवसायमा काम गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ, तपाईंले अपोइन्टमेन्ट लिंक समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। भेटघाट सुविधा विशेष रूपमा सेवा प्रदायकहरूको लागि जस्तै नाउ र कपालको लागि उत्तम हो। जस्तै सेवामा जडान गर्नुहोस् Books or शैलीसाइट र उनीहरूलाई तपाइँका भेटहरू बुकि booking गर्न ख्याल राख्नुहोस्।
तपाईंको गुगल व्यवसाय प्रोफाइल ताजा राख्दै
तपाईंको प्रोफाइल स्थापना र तपाईंको जानकारी अप टु डेट राखी, Google मेरो व्यवसायले तपाईंलाई नयाँ र अवस्थित ग्राहकहरूलाई व्यस्त राख्नको लागि तरिकाहरू प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाई पोष्टहरु को लाभ लिन सक्नुहुनेछaएक ब्लग जस्तै customers ग्राहकहरु लाई नयाँ उत्पादनहरु, विशेष घटनाहरु, वा केहि तपाइँको व्यापार मा केहि केहि के बारे मा सूचित गर्न।
पोष्टहरू सिर्जना गर्दै
एक विशेष प्रस्ताव को साथ एक पोस्ट सिर्जना गरौं। पोष्ट स्क्रिनको माथि रहेको पट्टीबाट "अफर थप्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्। तपाईंलाई शीर्षक, प्रस्ताव मितिहरू, र फोटोहरू थप्न प्रेरित गरिनेछ। तपाईं प्रत्येक प्रस्तावमा १० वटा फोटोहरू थप्न सक्नुहुनेछ, र हामी तपाईंलाई धेरै थप्न प्रोत्साहित गर्दछौं यदि त्यसो गरेमा तपाईंको पोष्टको लागि अर्थपूर्ण बनाउँदछ। तपाईं थप विवरणहरू जस्तै विवरण वा कुपन कोडहरू थप्न सक्नुहुन्छ, तर यो वैकल्पिक हो। प्रकाशित गर्नुहोस् बटन क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको पोष्ट तपाईंको सबै ग्राहकहरूको लागि हेर्नको लागि प्रत्यक्ष हुनेछ।
अर्को पोस्ट प्रयास गर्नुहोस्। यस पटक हामी सामान्य अपडेट गर्नेछौं। अपडेट पोष्ट प्रकार अन्य प्रकारका पोष्टहरू भन्दा कम विशिष्ट हुन्छ, त्यसैले यो व्यक्तिलाई तपाईंको व्यवसायको बारेमा सम्झाउनको लागि उत्तम तरिका हो। फेरि, तपाई धेरै फोटोहरू थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं आफ्नो पोष्ट लेख्नुहुनेछ। अब र अधिक वर्णनात्मक राम्रो छ, तर केहि गर्नेछ। अन्त्यमा, तपाईलाई बटन थप्न विकल्प दिइनेछ। बटनको प्रकार्य परिवर्तन गर्न सकिन्छ। बटन छनौटहरूमा फोन कल राख्ने, अनलाइन अर्डर गर्ने, वा थप सिक्ने समावेश छ। हामीले "थप सिक्नुहोस्" विकल्प छनौट गर्नुभयो, जसले हामीलाई हाम्रो वेबसाइटमा लिंक समावेश गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं फिट देख्न रूपमा तपाईं अन्य पोस्ट प्रकारहरूको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उत्पादनहरू थप्नुहोस्, महामारी अपडेटहरू प्रदान गर्नुहोस्, घटनाहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको ग्राहकहरूलाई व्यस्त राख्नुहोस्।
जब तपाईं एक पोष्ट प्रकाशित, तपाईं सामाजिक मीडिया र ईमेल को माध्यम बाट त्यो पोस्ट साझा गर्न को लागी क्षमता छ। यदि तपाईंसँग अवस्थित ग्राहक आधार छ जुन तपाईंलाई सोशल मीडियामा पछ्याउँदछ, यो तपाईंको व्यवसायको बारेमा शब्द बाहिर निकाल्ने एक सरल तरीका हो। (यदि तपाईंको व्यवसाय अहिलेसम्म सोशल मिडियामा छैन भने, हामीसँग तपाईंको लागि अर्को गाईड छिटै छिटै छ।)
तपाईको पोष्ट साझा गर्नका लागि तपाईको पोष्टको तल "शेयर पोस्ट" लिंक क्लिक गर्नुहोस्। पप-अपबाट, तपाईं सीधै फेसबुक, ट्विटर, वा ईमेल मार्फत साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईं लिंकलाई प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुनेछ र साझा गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ।
फोटोहरू पोष्टबाट अलग प्रबन्ध गरिएको छ। तर तपाईं अझै पनि नियमित आधारमा नयाँ फोटोहरू थपेर सment्लग्नता ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ, र यो धेरै छिटो प्रक्रिया हो जसमा धेरै सोचाइ वा ऊर्जाको आवश्यक पर्दैन। बाँया साइडबारमा फोटो लिंकमा जानुहोस्, त्यसपछि माथि दायाँ कुनामा निलो + बटन क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको नयाँ उत्पादहरू, आन्तरिक र तपाईंको ब्यापारको बाहिरी फोटोहरू, वा अरू केहि थप्नुहोस्। तपाईं भिडियोहरू थप्न सक्नुहुनेछ। केवल फोटोहरू थप्न केवल तान्नुहोस् र छोड्नुहोस्।
तपाईंको सामान्य फोटोहरूमा उत्पाद फोटो थप गर्नुको सट्टा, तपाईं तिनीहरूलाई उत्पादनको रूपमा अलग थप्न सक्नुहुन्छ। ग्राहकहरूले अझै छविहरू देख्नेछन्, तर तपाईं उत्पादन जानकारी, वर्णन, कोटी, र मूल्य जस्ता थप जानकारी थप्न सक्नुहुनेछ। तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र बायाँ मेनूमा उत्पादन लिंक को प्रयोग गरेर तपाईंको उत्पादनहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
समीक्षा समीक्षा गर्दै
गुगल समीक्षाहरू बनाइएका छन् वा धेरै व्यवसायका लागि ब्रेक छन्। धेरै खोजीकर्ताहरू र सम्भावित ग्राहकहरू समीक्षामा सिधा जान्छन् तपाईको व्यवसायले के गर्छ सही - र यसले के गलत गर्दछ भनेर। गुगलमा तपाईको जति र उत्तम समीक्षा छ त्यति नै सम्भावित ग्राहक तपाईको व्यवसायमा आउने सम्भावना बढी हुन्छ।
तपाई कसैलाई पूनरावलोकन छोड्न रोक्न सक्नुहुन्न (या त सकारात्मक वा नकारात्मक), तर तपाईका समीक्षा व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ केहि चीजहरू छन्।
समीक्षाको लागि सोध्नुहोस्
तपाईको ग्राहकलाई एक समीक्षा छोड्न सोध्नुमा त्यहाँ केहि गलत छैन। वास्तवमा, गुगल तपाईंलाई त्यसो गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। तपाईं नम्रतापूर्वक तर सिधा ग्राहकलाई एक समीक्षा छोड्न आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईं एक नोट कार्ड वा एक रसीद समावेश गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको ग्राहकलाई एक समीक्षा छोड्न प्रोत्साहन दिँदै। तपाईंको नियमित ग्राहकलाई एक समीक्षा थप्नको लागि सोध्नु तपाईंको रेटिंगलाई जारी राख्न मद्दत गर्दछ।
समीक्षालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईले प्राप्त गर्नुभएको समीक्षा राम्रो वा नराम्रो थियो, प्रतिक्रिया दिन केहि समय लिनुहोस् - यदि तपाई राम्रो कुरा भन्न सक्नुहुन्न भने, केही पनि भन्नु हुँदैन विचार गर्नुहोस्। सकारात्मक समीक्षाको लागि, एक सरल धन्यवाद पर्याप्त छ।
यदि तपाइँ तारकीय समीक्षा भन्दा थोरै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने, एक प्रतिक्रिया प्रस्ताव गर्नुहोस् जसले समीक्षकका टिप्पणीहरूलाई स्वीकार गर्दछ र तिनीहरूको अनुभव सुधार गर्न तपाईंले गर्न सक्ने समायोजनहरू प्रदर्शन गर्दछ। तपाईंको समीक्षाहरू पढ्ने मानिसहरूले देख्नेछन कि तपाईं व्यस्त र सकारात्मक अनुभव प्रदान गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। र प्रारम्भिक खराब समीक्षा छोड्ने व्यक्तिलाई पनि फेरि भेट्न र उनीहरूको समीक्षालाई पछि सम्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।
याद राख्नुहोस्, तपाईको गुगल मेरो ब्यवसायिक प्रोफाइल प्रबन्धन एक समय कार्य मात्र होईन। तपाइँको जानकारी प्रमाणित गर्न, नयाँ सामग्री थप्न, र तपाइँको समिक्षाहरू व्यवस्थित गर्न नियमित रूपमा अनुसरण गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई अझै पनि आफ्नो व्यवसाय प्रोफाइल सेटअप मद्दत आवश्यक छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस र हामी मद्दत गर्न सक्दछौं। तपाईं हाम्रो मार्फत सँगी व्यवसाय मालिकहरूमा पुग्नको लागि विचार गर्न सक्नुहुन्छ डचटाउन व्यवसाय मालिकहरू फेसबुक समूह.
अधिक गाईडहरूको लागि सम्पर्कमा रहनुहोस् ग्राहकहरूलाई तपाईंको व्यवसाय अनलाइन फेला पार्न मद्दत गर्न। योजना गरिएका विषयहरूमा तपाईंको व्यवसायको लागि फेसबुक पृष्ठ सेट अप गर्ने र साधारण वेबसाइट वा अनलाईन शप निर्माण गर्ने काम समावेश छ। यी मार्गनिर्देशनहरू हाम्रा प्रयासहरूको अंश हुन् डचटाउन व्यवसायहरू समर्थन गर्नुहोस् संसाधन र जानकारीको साथ। यदि त्यहाँ हाम्रो गाईडहरूमा हेर्न चाहानुहुन्छ भने, हामीलाई थाहा दिनु.
DutchtownSTL.org हाम्रो डचटाउन व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्दै गुगल मेरो व्यवसाय भाग दुई: व्यवसायहरूका लागि डचटाउनको गाइड